Jarmalka oo Soomaaliya ugu deeqay lacag wax looga qabanayo Abaarta | Entertainment and News Site
Home » News » Jarmalka oo Soomaaliya ugu deeqay lacag wax looga qabanayo Abaarta
Jarmalka oo Soomaaliya ugu deeqay lacag wax looga qabanayo Abaarta
daajis.com:- Dowladda Jarmalka ayaa ku caawineysa lacag dhan 20 milyan oo Yuuro, iyagga oo soo marsiinaya Qaramada Midoobay si loo yareeyo dhibaatada ka dhalatay abaarta ba’an ee ka jirta qaybo ka mid ah Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya.
NQaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay in ku dhawaad 13 milyan oo qof ay halis ugu jiraan gaajo. Itoobiya ayaa waxaa ka jirta abaar daba dheeraatay ka dib markii saddex xilli roobaad oo xiriir ah ay baaqdeen tan iyo dabayaaqadii 2020-kii taasoo saameysay 6.8 milyan oo qof oo ku nool Oromiya, SNNP, Koonfur-galbeed iyo dowlad deegaanka Soomaalida, deegaanno dhowr ah oo ku yaalla koonfurta iyo Koonfur-bari ee Itoobiya, oo ay ku jiraan gobollada Soomaalida (10 aag). Oromiya (8 aag), Koonfur-galbeed (aagga 1) iyo Shucuubta Koonfureed, Qowmiyadaha, iyo Shucuubta Koonfureed – SNNP (7 aag).
Dadka ku nool isla deegaanadan ayaa si dirqi ah uga soo kabsaday abaartii ba’an ee dhacday sanadkii 2017 si ay mar kale u arkaan xaalado adag oo sidan oo kale ah, kuwaas oo calaamadihii ugu horeeyay ay soo shaac baxeen dhamaadkii sanadka 2020-ka Soomaaliya, qiyaastii 1.4 milyan oo qof ayaa laga yaabaa in ay ku barakacaan xaaladda hadda jirta awgeed, waxaana 7.7 milyan oo ah kala bar dadka ay u baahan yihiin gargaar bini’aadantinimo.
“Jarmalku waxa uu Hay’adda Cunnada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay (FAO) ku siinaya 20 milyan oo Yuuro si loo hubiyo in dadka ku nool meelaha ay khatarta gaarka ah ka leeyihiin gaajada ay heli karaan gargaar degdeg ah. Lacagahan ayaa waxaa ka mid ah, in in ka badan 50,000 oo qof oo Soomaaliya ku nool lagu siiyo quud ay xoolahooda ku quudiyaan.
Itoobiya, 26 degaan ayaa la doonayaa in lagu soo celiyo dadkii abaarta ka barakixisay. Dalka Kenya, 15,000 oo qoys ayaa lagu wadaa inay helaan lacag caddaan ah oo bini’aadantinimo. Qaybo ka mid ah saddexda waddan, roobabku waxay hoos u dhaceen ilaa 70 boqolkiiba. Gobollada qaar ayaa xitaa dhibaato soo gaartay.
Degaano iyo degmooyin badan oo kuyaalla Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa xilligaan kajira abaar baahsan, waxaana weli dadka Soomaaliyeed aysan helin gurmadkii Caalamiga ahaa ee loo baahnaa.
Posted by Bulsha Arrimaha Bulshada, Published at 15:06 and have